Telegrama ICO drafitra - Blockchain News
Drafitra telegrama multi-arivo tapitrisa dolara ho an'ny amin'ny chat ICO cryptocurrency
Hafatra misy mari-pamantarana startup telegrama mikasa ny hanomboka azy manokana blockchain sehatra sy ny tompon-tany cryptocurrency, powering vola eo amin'ny fampiharana amin'ny chat sy tany an-dafin'i. Araka ny loharanom-baovao maro izay efa nolazaiko TechCrunch, ny "telegrama Open Network" (Ton) Ho vaovao, 'Taranaka fahatelo' blockchain amin'ny ambony fahaiza-manao, rehefa Bitcoin sy, taty aoriana, Ethereum nanamora ny nanaovana.
Ny fandefasana ho amin'ny famatsiam-bola goavana voalohany Coin Fanatitra, tsy mivoaka tsy miankina amin'ny varotra miainga mialoha ho any an-jatony tapitrisa, mety mahatonga izany ny iray amin'ireo lehibe indrindra hatramin'izao ICOs. Fangatahana dia entin'ny zava-misy izay fa tsy ny ICO vaovao avy startup, Telegrama dia tsara orina hafatra ampiasaina sehatra manerana izao tontolo izao.
Nanangana ny homegrown cryptocurrency afaka manome telegrama rafitra fandoavam-bola goavana ny fahaleovan-tena avy amin'ny governemanta na ny banky - zavatra mpiara-manorina sy Pavel Durov CEO fantatra ny mitsiriritra rehefa nandray ny mpampiasa vola ny orinasa farany, VK tambajotra sosialy Rosiana. Durov tsy namaly ny maro TechCrunch ezaka mba hifandray azy momba ity tantara ity.
Ny mety ho cryptocurrency be ao anatin'ny fampiharana dia nandray hafatra goavana.
Amin'ny cryptocurrency Powered vola ao telegrama, mpampiasa afaka handoahana ny fahabetsahan'ny famindram-bola, rehefa naniraka vola saram manerana sisintany iraisam-pirenena, mihetsika vola mangingina noho ny fampiharana ny encryption, afaho micropayments izay hiharan'ny avo loatra ny carte de crédit saram, sy ny maro hafa. Telegrama dia efa tonga izao ny mihazona ny fifandraisana fantsona ho an'ny fiaraha-monina eran-cryptocurrency, manao voajanahary an-trano ho azy manokana vola sy Blockchain.
Nivarotra iray taonina cryptocurrency
Telegrama dia fantany ho mihevitra mitaiza araka izay $500 tapitrisa ao amin'ny mialoha ny fivarotana ICO amin'ny mety ho antoka tanteraka sarobidy eo isan-karazany $3 lavitrisa ny $5 lavitrisa. Na izany aza, ireo tarehimarika afaka hiova eo anatrehan'i ICO, izay mety ho tonga raha vao Martsa. Ireo tarehimarika dia ho azy manokana angamba ny lehibe indrindra crypto hanangana ny daty rehefa Tezos, izay hanarona $230 tapitrisa in Jolay.
Ny mialoha ny fivarotana tao amin'ny ICO dia ambany indrindra amin'ny fampiasam-bola Cap (indraindray miaraka amin'ny fihenam-bidy) mba hisarika mpampiasa vola lehibe ('Trozona') mialoha ny midadasika kokoa ny famantarana fivarotana antsinjarany mpampiasa vola. ny vahoaka, mpaninjara dingana iray ICO mitady hanangana kely satria misy rambo lava be ny olona mampiasa vola vola madinika. Fa anoloan'ny-pamatrarana ny ICO amin'ny fampiasam-bola dia mitaona matoky rafitra ho an'ny mpampiasa vola antsinjarany.
Ireo mpampiasa vola mialoha fivarotana mety ho ilaina ny mametraka ny ambany indrindra Buy-in ny $20 tapitrisa raha ry zareo ivelan'ny i Durov anaty boribory. Sources milaza fa ny ICO tena Fiat dia hitaky vola toy ny US dolara ho an'ny Buy-in, Bitcoin tsy toy ny olon-kafa na ny Etera ICOs tsy maintsy daty.
Top-dia ambany noho rafitra orinasa fampiasam-bola naneho liana, fa Durov dia voalaza fa Mitandrema ny manaiky ny vola. Iray mafy tsaho fa nanosika ho mialoha fivarotana fanomezana dia Mail.Ru Group (DST taloha), nanorina ny Rosiana Yuri emigre Milner. Ny mpitondra tenin'ny DST tsy valio ny fanontaniana momba ity tantara ity. Mahaliana, Mail.Ru Group dia ny tahirim-bola izay niafara Durov mividy ny orinasa farany VK.
Ny fahatakarana telegrama Open Network
Durov ny hevitra dia ny hanomboka vaovao tanteraka blockchain, mampiasa ny telegrama ny 180 tapitrisa ireo mpampiasa toy ny balafomanga solika eo amin'ny fitondrana hatrany ho mahazatra eny cryptocurrency fananganan'anaka sy ny fanaovana telegrama, amim-pahombiazana, ny kingmaker hafa cryptocurrencies, noho ny efa misy sehatra.
Araka ny telegrama ny taratasy fotsy fa manana famerenana TechCrunch ampahany, ny cryptocurrency dia hatao hoe "gram" ary mety afaka hahazo avy hatrany amin'ny alalan'ny fananganan mahazatra rehefa mifatotra ho any amin'ny chat telegrama ny fampiharana.
Sources hoe Durov dia nanapa-kevitra ny hanambatra ny foibe na foto-drafitrasa sy ny fitongilànana, satria tanteraka fitongilànana tsy habeny tambajotra toy ny fifadian-kanina toy ny sasany izay manana singa centralization, Noho izany antony telegrama mila ihany ny tenany blockchain.
Mifindra amin'ny sehatra blockchain décentralisées afaka mamono vorona roa amin'ny vato iray for telegrama. Ary koa ny famoronana manontolo cryptocurrency tsofina toe-karena ao anatin'ny fampiharana, izany koa mifindra izany hamely ny fanafihana sy ny fiampangana ny firenena-fanjakana toy ny Iran, aiza izany ankehitriny mahatonga 40% ny Iran ny aterineto fifamoivoizana saingy nosakanana vonjimaika anivon'ny firenena hetsi-panoherana manohitra ny governemanta.
Telegrama dia nandray marefo ara-politika ny mampifandanja ny asa sy ny miezaka hitana ny mpampiasa ao amin'ny firenena, fanakatonana fantsona ho an'ny sasany mitaky ny nianjeran'i ny governemanta, raha mitandrina ny hafa misokatra.
WeChat fa amin'ny Crypto
miaraka Ton, Telegrama mikendry ny hampitombo cryptocurrency-monina jiro Mitovy amin'ny WeChat, izay nandroso, ho mihoatra lavitra noho ny amin'ny chat fampiharana sy miasa toy ny toerana misy anao rafitra fandoavam-bola ho an'ny maro ao Shina.
Raha azo atao vola be haingana ao amin'ny WeChat ny tolotra isan-karazany, ny rafitra tena foibe sisa. A décentralisées sehatra toy ny Ton afaka manolotra bebe kokoa ny fiarovana sy ny niatrika an'izany.
Loharanom-baovao milaza fa telegrama mikasa ny hamela ireo mpampiasa mba hanao na telegrama ny vola sy ny Fiat vola ao amin'ny kitapom-batsy tsy mivoaka.
Nisy ihany koa ny tontolo iainana efa misy developer telegrama Manamafy orina ny manodidina azy, izay bots sy ny tolotra ireny aterina araka antoko fahatelo-mpandraharaha. indray, eto taonina afaka, in teoria, underly ny zava-drehetra ny developer mitondra ny telegrama.
Ao anatin'ny 132 Pejy taratasy fotsy, Telegrama dia voalaza ho sehatra efatra-drafitra:
"Taonina Services" ho sehatra ho an'ny antoko fahatelo-asa na inona na inona izay manome fahafahana finday avo lenta toy ny namana interface ho an'ny fitongilànana Apps sy marani-tsaina fifanarahana.
"Taonina DNS" dia fanompoana ho an'ny olona fanendrena-vakiana anarana kaonty, marani-tsaina sy ny fifanarahana asa Network nodes. Miaraka Ton DNS, miditra décentralisées tolotra mety ho toy ny "mijery ny vohikala teo amin'ny World Wide Web."
"Taonina fandoavam-bola" dia sehatra ho an'ny micropayments sy ny fantsona micropayment Network. Izany dia mikendry ny ho ampiasaina amin'ny "indray mipi-maso eny-famindrana rojo sarobidy eo amin'ny mpampiasa sy ny hafa tolotra bots". Fiarovana naorina tany an-rafitra dia natao mba ho azo antoka fa ireo famindrana "dia toy ny tsy manana ahiahy toy ny amin'ny-rojo varotra".
Ny "Ton Blockchain" no ahitana ny tena mahay sy rojo 2-to-ny-hery-ny-92 niaraka blockchains. Ny lafiny miavaka indrindra moa fa dia hanana "Infinite Sharding modelim" mba hanatratrarana scalability. Noho izany, Taonina blockchains mikendry ny ho afaka ny "ho azy sy mampiray nizara ny handraisana fiovana entana". Izany dia midika biriky vaovao dia niteraka haingana sy "ny tsy fisian'ny filaharam-be dia manampy foana barotra vidin'ny ambany, na dia ny sasany amin'ireo asa fampiasana ny sehatra ho tonga nirohotra malaza ".
Izany koa javatra dia avy amin'ny "Instant Hypercube tambazotra" natao toy izany koa ny blockchain dia afaka foana ny hafainganam-pandeha ambony toy ny mitombo. Ny porofo ny fomba tsatòka dia hahatratra marimaritra iraisana amin'ny alalan'ny Variant ny 'fahadisoan'ny Byzance, no milefitra' fifanarahana, indray mitombo haingana sy ny fahombiazan'ny. Ary koa mampiasa 2-D Hozaraina anatin'ny boky firaketana. Midika izany dia afaka mitombo ny taonina biriky manan-kery vaovao an-tampon'ny na inona na inona kilalao miendrika biriky izay voaporofo fa diso ny tsy misy ilaina fitrebika. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, Ton mikendry ny ho 'tena-fanasitranana'.
Ny taranaka fahatelo Ton blockchain dia mifototra amin'ny mavitrika 'porofon'ny tsatòka' antoka ny antoko maro tamin'ny ambony ny fahadisoana fandeferana. Izany koa hiatrehana fitahirizana ny ID, vola sy ny manan-tsaina fifanarahana. Noho izany, fa tsy miantehitra amin'ny porofo ny asa mba hamoronana ny sandam-, Dia miantehitra amin'ny telegrama vaovao, tsy angovo-hogging fomba cryptocurrency harena ankibon'ny tany am-boalohany noho ny fomba Bitcoin.
Ny milaza fa dia ho afaka ny lavitra noho ny isan'ny fifanakalozana, manodidina 1 tapitrisa isan-tsegondra. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, mitovy amin'ny nofinofy ny Polkadot tetikasa avy tany Berlin - fa tamin'ny nametraka pototry 180 tapitrisa. Izany no mahatonga azy ho "interchain 'amin'ny antsoina hoe' mavitrika sharding '.
Ny taratasy fotsy mazava ihany koa fa ny efatra isan-jaton'ny ny fanomezana ny grama (200 tapitrisa grama) dia hotehirizina ho amin'ny fampandrosoana telegrama ny ekipa miaraka amin'ny efa-taona vesting fe-potoana. Telegrama koa mikasa ny hitana ", fara fahakeliny, 52 isan-jato "ny manontolo fanomezana ny grama cryptocurrency mba hiarovana azy tsy ho tombantombana varotra ka omeo manovaova. Ny ambiny 44 isan-jato dia hamidy any na ny miankina sy tsy miankina ny fivarotana.
Ny vola no voalaza ao amin'ny fifanakalozana ivelany, ary ampiasaina ao anatin'ny App ny telegrama.
Fotoana hendry, telovolana voalohany tamin'ity taona ity dia hahita ny fandefasana ny telegrama ivelany Secure ID, Nanaraka azy ny MVP ny Ton. Ny fanokafana ny telegrama Wallet no noeritreretina hatao ny Q4 2018, ary ny fananganana ny taonina ara-toe-karena mety hanomboka amin'ny Q1 2019. Ny sisa amin'ny taonina Services dia hanaraka amin'ny Q2 2019.
Ny sasany ao amin'ny fiaraha-monina crypto mbola resy lahatra ny taonina. "Mieritreritra aho izao fotsiny no PDG ny fomba monetizing telegrama, ankapobeny,"Hoy i Jackson Palmer, ny mpanorina ny tany am-boalohany cryptocurrency Dogecoin.
A loharanom-baovao techcrunch.com
Nahasarika avy amin 'ny ...
Mastercard patanty loza ...
Previous Post:Blockchain News 8 Janoary 2018
Next Post:Blockchain News 9 Janoary 2018